महेन्द्रकै पालामा यसरी किनेको थियो नेपालले पानी जहाज ! – Todays Nepal
महेन्द्रकै पालामा यसरी किनेको थियो नेपालले पानी जहाज !
नेपाल भूपरिवेष्टित राज्य हुँदाहँुदै पनि एक समय पानीजहाज भित्र्याएर देशको उन्नति गर्ने सोच बनेको थियो। सन्दर्भ विसं २०२५ तिरको हो। त्यति बेला भारतमा पानीजहाजको क्षेत्रमा सिन्धिया स्टिम नेभिगेसन कम्पनी र इस्टर्न नेभिगेसन कम्पनी प्रख्यात थिए। भारतीय नीतिका कारण ती कम्पनीका जहाजले पाकिस्तान, बर्मा, चीनलगायतका मुलुकसम्म बिनारोकटोक आवतजावत गर्न पाएका थिएनन्। तर, चिनियाँ पानीजहाज भने आफ्ना मालसामानका साथ निर्बाध रूपमा पाकिस्तान, बर्मा र नेपाल हुँदै भारतसम्म सहज रूपमा पुग्थे।
सो पानीजहाजको नाम दिइएको थियो नरेन्द्रलक्ष्मी, पृथ्वीनारायण शाहकी पत्नीको नाम ।
सर्वस्व गुमाएर पाएको पिआरले के गरू ?
कांग्रेसमा पुस्तान्तरः ४० वर्षमुनिका नेता भेट्न मुस्किल !